महराको ९ दिन हिरासतमै बास, अब के हुन्छ ? - Gandak News
महराको ९ दिन हिरासतमै बास, अब के हुन्छ ?
गण्डकन्यूज द्वारा २१ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं-यतिबेला सबैतिर दशैंको रौनक छ । सबैले दशैंमा शुभकामना आदानप्रदान गरिरहेका छन् । यहि बेला यौन दुव्र्यवहारको काण्डमा फसेका निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको भने हिरासतमा बास छ ।
महराको हिरासत बास ९ दिनको हुने भएको छ । उनलाई यही असोज २८ अदालतमा पेश गरिँदैछ । सभामुख बहाल रहेकै बेला यौन दुव्र्यवहारको अभियोग लागेका महराले पदबाट राजीनामा दिएर कानूनी प्रक्रियाबाट जोगिने प्रयास असफल भयो । पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले जवरजस्ति करणी प्रयासमा किटान जाहेरी दिएपछि आइतबार साँझ महरा पक्राउ परे ।
पक्राउ परेका महरा अहिले हिरासतमा छन् । अनि यतिबेला महराको कारवाही प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छ र के के प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने बहस शुरु भएको छ ।
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च ओहोदामा रहँदा निकृष्ट कर्मको अभियोगमा पक्राउ परेर निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले इतिहास रचेका छन् । पदबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि पनि आइतबार सभामुखको सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका महरालाई सिंहदरवारस्थित प्रहरी बृत्तमा राखियो ।
स्वास्थ्य समस्या कारण देखाएर महरा वीर अस्पतालको भीआइपी कक्षमा बस्ने तयारीमा छन् । महरालाई निकृष्ट कर्मको अभियोग लागेपनि प्रमाणित भने भइसकेको छैन ।
अभियोग नै गम्भीर अपराधको भएका कारण प्रहरी पक्राउ गर्न बाध्य भएको छ भने गम्भीर अपराधको आरोप लागेकाले अनुसन्धान गम्भीर रुपमा अघि बढ्ने बताउँछन बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी ।
दशैको अष्टमीमा पक्राउ परेका महराले कानूनी प्रक्रियाकै लागि पनि आगामी असोज २८ गतेसम्म कुर्नुपर्नेछ । आगामी २६ गतेसम्म सरकारी बिदा तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको निधनमा २७ गते बिदा दिइएकाले आगामी २८ गते पछि मात्र महराको केस अदालतमा पुग्ने छ ।
अर्थात प्रहरीले अदालतबाट म्याद नथप्दै महरालाई ९ दिनसम्म थुनामा राख्ने छ । उनको सरकारी वकिलको उपस्थितिमा हुने औपचारिक बयान अगाडी नै सकियो भने बल्ल महराका विषयमा अदालतमा थुनछेक बहस शुरु हुनेछ ।
अब महरालाई पीडित महिलालाई दवाव दिएको प्रमाणित भएमा थप सजाय हुने तर्क गर्छन बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी । महराका विषय सुरुवाती हप्ता ढाकछोपका संकेत देखिएपनि सामाजिक संजाल र समाचारको प्रभावमा उनी माथि लागेको आरोप बहसमा आयो । तर, अपराधमा समेत राज्यको संरक्षण देखिएको भन्ने प्रतिपक्षी दलकोसमेत अरोपसहितको दवावले महराको विषय समान्य ढाकछोपको विषय बन्न असम्भव जस्तै बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
महरा काण्डलाई नाम उल्लेख नगरी पश्चिमा राष्ट्रहरुले समेत चासो राखेका छन् । लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषय उठाइसकेपछि नछोड्ने पश्चिमाको चासो र प्रतिपक्षी दवावपछि पक्राउसम्म पुगेको सरकार पनि यो विषयमा हेलचेक्राइ गर्ने अवस्थामा छैन । दशैको मुखमा भएको महराको पक्राउले धेरैलाई स्तव्ध पारेको छ । परिवाजनमा त्यसले पारेको असर आकलन भन्दा बाहिरको छ । उनको अभियोग नै गम्भीर भएकाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बाहेक उनको परिवार पार्टी र सुभेच्छुकसँग अर्को विकल्प छैन ।